LeadPages dia sehatra pejy fipetrahana izay ahafahanao mamoaka pejin-tranonkala misy maodely, mandray andraikitra miaraka amin'ny mpamorona tsy misy kaody, drag & drop, kitiho vitsivitsy monja. Miaraka amin'ny LeadPages, afaka mamorona pejy fivarotana mora foana ianao, vavahady tongasoa, pejin'ny fipetrahana, pejy fanombohana, pejin-pejy, fanokafana pejy tsy ho ela, pejy fisaorana, pejin'ny sarety, pejy mivarotra, pejy momba ahy, pejy andiany fanadihadiana ary maro hafa… 200+ modely misy. Miaraka amin'ny LeadPages, azonao atao ny: Mamorona ny fisianao an-tserasera - mamorona
Zoma 19 Novambra 2021 Zoma 19 Novambra 2021 Jeff Kupietzky
Lasa mahazatra amin'ny famoahana nomerika ny Paywalls, saingy tsy mahomby izy ireo ary miteraka sakana amin'ny fahalalahan'ny asa fanaovan-gazety. Fa kosa, ny mpamoaka lahatsoratra dia tsy maintsy mampiasa dokam-barotra mba hahazoana vola amin'ny fantsona vaovao ary hanome maimaim-poana ny atiny iriny ho an'ny mpanjifa. Tany amin'ny taona 90, rehefa nanomboka nanetsika ny votoatiny an-tserasera ny mpamoaka lahatsoratra, dia nisy tetika maromaro nipoitra: ny lohateny lehibe ho an'ny sasany ihany, ny fanontana manontolo ho an'ny hafa. Rehefa nanangana fanatrehana tranonkala izy ireo, karazana vaovao tanteraka amin'ny nomerika ihany